၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ သွင်းကုန် နှင့် ပို့ကုန် ပထမဆုံးအကြိမ် ဒေါ်လာ ၆ ထရီလီယံ အထိရောက်ရှိ မည် - Pandaily
ပေကျင်း အာဏာပိုင်များက သောကြာနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အကောက်ခွန် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Li Kuiwen က အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က တရုတ်၏ နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ် မှုသည် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွား ခဲ့သည်.
၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္စည္ ကုန္သြယ္ မႈမွ သြင္းကုန္ သြင္းကုန္ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ယြမ္ ၃၉ ဒသမ ၁ ထရီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၅ ထရီလီယံ) ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကထက္ ၂၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ ခဲ့ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ ကိန္းဂဏန္း မ်ားကို ကိုးကား၍ လီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူတို့တွင် စုစုပေါင်း ပို့ကုန် မှာ ၂၁. ၇၃ ထရီလီယံ ယွမ် ရှိပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၁. ၂% တိုးလာပြီး သွင်းကုန် မှာ ၁၇. ၃၇ ထရီလီယံ ယွမ် ရှိပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၁. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။ 2019 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ၊ ပို့ကုန် နှင့် သွင်းကုန် များသည် ၂၃. ၉% ၊ ၂၆. ၁% နှင့် ၂၁. ၂% အသီးသီး တိုးတက်ခဲ့သည်။
လီ သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ် မှုသည် ကဏ္ five ငါးခု တွင်အဓိက တိုးတက်မှု များကိုပြသ လိမ့် မည်ဟုလည်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှု စံချိန်တင် မြင့်တက်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ သွင်းကုန် နှင့် ပို့ကုန် ပမာဏ သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆. ၀၅ ထရီလီယံ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဒေါ်လာ ၄ ထရီလီယံ သို့ရောက်ရှိ ပြီးနောက် ရှစ် နှစ် အကြာတွင် ယခုနှစ်တွင် အမြင့်ဆုံး သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သော တစ် နှစ်က ဒေါ်လာ ၁. ၄ ထရီလီယံ တိုးတက်ခဲ့သည်။
အဓိက ကုန်သွယ် ဖက် ငါး နိုင်ငံ နှင့် တရုတ်၏ ကုန်သွယ်မှု သည်ပုံမှန် တိုးတက် နေသည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ ထိပ်တန်း ကုန်သွယ် ဖက် ငါး နိုင်ငံမှာ အာဆီယံ ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန် နှင့် တောင်ကိုရီးယား တို့ဖြစ်သည်။ အာဆီယံ ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သို့ တရုတ်၏ သွင်းကုန် နှင့် တင်ပို့ မှုသည် ၁၉. ၇% ၊ ၁၉. ၁% နှင့် ၂၀. ၂% အသီးသီး တိုးတက်ခဲ့ပြီး ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား နှင့် ကုန်သွယ် မှုမှာ ၉. ၄% နှင့် ၁၈. ၄% အသီးသီး တိုးတက်ခဲ့သည်။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ Belt and Road Initiative တြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံ မ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ မႈသည္ ပ်မ္းမွ် ထက္ ၂၃ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ လာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
အထွေထွေ ကုန်သွယ်ရေး တင်သွင်း မှုနှင့် ပို့ကုန် အချိုးသည် ၆၀% ကျော် ရှိသည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၏ အထွေထွေ ကုန်သွယ်ရေး သွင်းကုန် နှင့် ပို့ကုန် သည်ယွမ် ၂၄. ၀၈ ထရီလီယံ ရှိပြီး ၂၄. ၇% တိုးလာပြီး စုစုပေါင်း၏ ၆၁. ၆% ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ပို့ကုန် မှာ ၁၃. ၂၄ ထရီလီယံ ယွမ် ၊ ၂၄. ၄% တိုးလာပြီး သွင်းကုန် မှာ ၁၀. ၈၄ ထရီလီယံ ယွမ် ၊ ၂၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။ အလားတူ ကာလအတွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကုန်သွယ်မှု ၏စုစုပေါင်း သွင်းကုန် နှင့် ပို့ကုန် သည်ယွမ် ၈. ၅ ထရီလီယံ ရှိပြီး ၁၁. ၁% တိုးတက်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ၂၁. ၇% ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ပေကျင်း သည်တရုတ် စက်ရုပ် လုပ်ငန်း အတွက် “ ၁၄ နှစ် ငါးနှစ် စီမံကိန်း” ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်ကြိုးစား ပါ
တရုတ် ကုမ္ပဏီများသည် နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ် မှုတွင်ပါ ၀ င် ကြသည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် သွင်းကုန် နှင့် ပို့ကုန် လုပ်ငန်းများတွင် တရုတ် ကုမ္ပဏီ ၅၆ ၇၀၀၀ ပါဝင်ပြီး ယခင်နှစ် ကထက် ၃ ၆၀၀၀ တိုးလာသည်။ ၎င်းတို့အနက် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်း များ၏ သွင်းကုန် နှင့် တင်ပို့မှု သည်ယွမ် ၁၉ ထရီလီယံ ရှိပြီး ၂၆. ၇% တိုးတက်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ၄၈. ၆% ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း များ၏ သွင်းကုန် နှင့် ပို့ကုန် သည်ယွမ် ၁၄. ၀၃ ထရီလီယံ ၊ ၁၂. ၇% တိုးတက် မှု၊ တရုတ် နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များ၏ သွင်းကုန် နှင့် ပို့ကုန် သည်ယွမ် ၅. ၉၄ ထရီလီယံ ၊ ၂၇. ၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။
စက်မှု နှင့်လျှပ်စစ် ထုတ်ကုန်များ တင်သွင်း မှုနှင့် တင်ပို့ မှုသည် အပြုသဘောဆောင်သော တိုးတက်မှု လမ်းကြောင်း ကိုထိန်းသိမ်း ထားသည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၏စက်မှု နှင့်လျှပ်စစ် ထုတ်ကုန်များ တင်ပို့မှု သည်ယွမ် ၁၂. ၈၃ ထရီလီယံ ရှိပြီး ၂၀. ၄% တိုးလာပြီး စုစုပေါင်း ပို့ကုန် ၏ ၅၉% ရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက် အလိုအလျောက် ဒေတာ ထုတ်ယူ သည့်ကိရိယာ များနှင့်ဆက်စပ် အစိတ်အပိုင်းများ၊ စမတ်ဖုန်း များနှင့် မော်တော်ယာဉ် များသည် ၁၂. ၉% ၊ ၉. ၃% နှင့် ၁၀၄. ၆% အသီးသီး တိုးတက်လာခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စက်မှု နှင့်လျှပ်စစ် ထုတ်ကုန်များ တင်သွင်း မှု သည်ယွမ် ၇. ၃၇ ထရီလီယံ ရှိပြီး ၁၂. ၂% တိုးလာပြီး စုစုပေါင်း တင်သွင်း မှု၏ ၄၂. ၄% ရှိသည်။ ၄ င်းတို့ အနက် ပေါင်းစည်းထားသော ဆားကစ် များ တင်သွင်း မှုမှာ ၁၅. ၄% တိုးတက်ခဲ့သည်။